2020 မှာ Console အသစ် ထုတ်ပြမယ်လို့ ကတိပြုထားတဲ့အတိုင်း Sony ၊ Microsoft တို့ မထိတထိ ဖိုက်နေကြပါြပီ။ ကျွန်တော်တို့ ဂိမ်းလောကမှာလည်း Original Console ဆိုလို့ များများစားစား ဘာရှိလို့လဲ? Nintendo System ပါမှ ၃ မျိုးပဲ ရှိတာဆိုတော့ အမာခံ ပရိသတ် မနည်းပါဘူး။
ဒါမယ့် မေးခွန်းမမေးလည်း အဖြေက သိနှင့်နေပြီ ထင်ပါတယ်။ လူတွေပါးစပ်ဖျားမှာ Xbox ထက် PlayStation ကို သဘောခွေ့ကျသလို စီးပွားဖြစ်လုပ်စားနေတဲ့ အွန်လိုင်းဂိမ်းဆိုင်တွေမှာ PS ကိုပဲ အတွေ့များတယ်။ အစဥ်ဆက် စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမှာ Microsoft ပိုသာနေစမြဲဆိုမယ့် Sony ကို မလန်နိုင်သေးတာ ဘာကြောင့် ဖြစ်မယ်ထင်လဲ? (Exclusive Game တွေ မပါသေးဘူးနော်)
You’re not my greatest Enemy!!!
Consoles အသစ်တွေ မိတ်မဆက်ခင်မှာ Xbox အကြီးကဲ ဖြစ်သူ Phil Spencer ပြောသွားခဲ့ဖူးတာ Sony ဟာ သူတို့ရဲ့ Main Competitor မဟုတ်ပါဘူးတဲ့၊ Console အသစ် ထုတ်တာ PlayStation ကို တည့်ဖိုက်ဖို့ မဟုတ်သလို ပစ်မှတ်ထားတဲ့ Target က Amazon လို့ နှုတ်ဖျားက ထွက်ခဲ့ဖူးတယ်။
ဘာလို့လဲ မသိပေမယ့် ကုမ္ပဏီ ၂ ခုသွားနေတဲ့ Approach မတူဘူး၊ အရင် Generation တွေတုန်းက မသိသာပေမယ့် အခု မျိုးဆက်သစ် Console မိတ်ဆက်လာတဲ့အခါမှာ ဘယ်သူပိုသာတယ် တပ်အပ်ပြောလို့ရတဲ့ အချက်တွေ ရှိလာပါပြီ။
ဒီတော့ စာဖတ်သူတွေ မြင်သာအောင် Xbox Series X vs. PlayStation5ဆောင်းပါးကို အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ခေတ်စကားအရ ပြောရရင် အသက်ကြီး နောက်တနည်း ဝါရင့်တဲ့သူတွေကို သဘာရင့်တယ် ၊ ပိုဂျွတ်တယ်လို့ သမှုတ်ကြသလိုပဲ Consoles ၂ မျိုး ပြိုင်ကြေညာပြီးတဲ့အချိန် ကောင်းကြောင်း သမှုတ်ခံရတာ PlayStation ပါ။
Fully Backward Compatible with PS4 Games
ကာရိုနာမွေနေလို့ သတိပြုမခံရတာခြင်း အတူတူတောင်မှ Sony နည်းပညာတွေကို သဘောခွေ့ကျတယ်။ သီအိုရီအရ Compute Power (စွမ်းဆောင်ရည်) Xbox ပိုသာတာ မှန်ပေမယ့် စစ်သူကြီးနဲ့ သူရဲကောင်း ၊ Ferrari နဲ့ Ford လို အနေထားမျိုး ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် Respect တော့ ထားရမယ်။
တစ်မအေက မွေးထုတ်လိုက်တဲ့ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက် ဥာဏ်ရည် မတူသလိုပဲ AMD ခြံပေါက် Zen2Architecture သုံးထားတဲ့ CPU Brain ပါတာခြင်း အတူတူတောင် Xbox က နှာတဖျား သာချင်တယ် (တကယ်လည်း ပိုသာပါတယ်)
Xbox Seris X PlayStation 5
Custom AMD Zen2CPU 8-cores at 3.8GHz (3.6GHz with SMT) 8-cores at 3.5 GHz (Variable Frequency)
ထွက်ဖူးသမျှ Console တွေကိုကြည့်လိုက် PS4 vs Xbox One X မှာတုန်းကလည်း AMD ရဲ့ Custom Jaguar Processor သုံးထားတာခြင်း အတူတူကို 2.3GHz vs 2.1GHz (+200MHz) အသာယူထားတယ်။
Xbox Seris X Processor (Image: The Verge)
ယေဘူယျအားဖြင့် တွက်ကြည့်ရင်တော့ Processor တစ်လုံးဟာ Clock Speed များရင် ပိုမြန်တယ်ဆိုတဲ့အတွက် Compute Power က Sony ထက် မစိုစလောက်လေး သွားသာနေတယ်။
But they Differ
ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခေါ သွားထားတဲ့ Approach ကတော့ ကွဲလွဲမှုတချို့ ရှိလာမယ် ထင်ပါတယ်။ Real-life Performance မှာ ဘာကွာသွားမလဲ မခန့်မှန်းတတ်ပေမယ့် Microsoft ပြောပုံအရ Xbox ဟာ Single-core Speed ကို 3.8GHz အထိ တင်ပေးနိုင်မယ်။
တကယ်လို့ Multi-core သုံးရင်ဖြစ်ဖြစ် Application ပေါ် မူတည်ပြီး Clock Speed ကို 3.66GHz နဲ့ Run ခိုင်းမယ်ဆိုတဲ့အတွက် မော်ဒယ်ဟောင်းတွေထက် Clock Frequency ပိုများတယ်။ သိတဲ့အတိုင်း ဂိမ်းတွေနဲ့ Software တချို့က Single-core ၊ Dual-core Speed ကို ပိုပြီး မှီခိုတဲ့အတွက် Performance ကတော့ 40% ထက် မနည်း ပိုကောင်းလာမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
PlayStation5Xbox Series X Xbox One X Xbox One S PlayStation4Pro
Processor AMD Zen2(3.5GHz, eight-core) AMD Zen2(3.8GHz, eight-core) AMD Jaguar (2.3GHz, eight-core) AMD Jaguar (1.75GHz, eight-core) AMD Jaguar (2.1GHz, eight-core
PS5 ကတော့ ထိုနည်းလည်းကောင်း ပုံစံကိုမှ 3.5GHz Top Speed နဲ့ အလုပ်လုပ်မယ်၊ မိတ်ဆက်ပွဲမှာ ပြောသွားတဲ့အတိုင်း 7nm Node မှာ စွမ်းဆောင်ရည် တိုးမလား ဒါမှမဟုတ် စွမ်းအင်ခြွေတာမလား ၂ မျိုးလုပ်နိုင်တဲ့အတွက် ဒီညီမျှချင်း ၂ ခုကို Sony ကောင်းကောင်း အသုံးချထားပါတယ်။
PC တွေမှာ အသုံးပြုမယ့် တတိယမျိုးဆက် Ryzen Processor ဖြစ်လင့်ကစား ဂိမ်းနဲ့ Software လိုအပ်ချက်အလိုက် Processing Power ကို လိုသလောက်ပဲ ထုတ်ပေးမယ်။ Variable Frequency လို့ သုံးထားတာက Microsoft လို Default ကန့်သတ်လိုက်တာ မဟုတ်ဘဲ GPU ကိုပါ ဂိမ်းလိုအပ်သလောက် Frequency နဲ့ Run စေမှာပါ။
ဒါကြောင့် PlayStation5က Console ဆိုပေမယ့် PC တစ်လုံး အပူ Control လုပ်တဲ့ Process လို ချဥ်းကပ်ထားတဲ့အတွက် စွမ်းအင်ကိုလည်း ချွေတာရာ ရောက်တယ်၊ ဒိအတွက် အပူထွက်နည်းပြီး Cooling လုပ်ဖို့အတွက်လည်း ပိုအဆင်ပြေစေတာပါ။
Better than PC RAM
Console တွေကို နှစ်သက်မိတဲ့ နောက်တစ်ချက်ကို ထောက်ပြပါဆိုရင် သူတို့တွေမှာ သုံးထားတဲ့ Memory ပါ။ လက်ရှိ Consumer PC တွေထဲမှာ အမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့ ကွန်ပျူတာတောင် DDR4 ကို မှီခိုရတုန်း။
Console အသစ်မှာကျ GDDR6 အမျိုးစား အသုံးပြုထားပြီး 16GB Size ရှိပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေ ရွာလည်သွားနိုင်တာက PS5 နဲ့ Xbox Series X မှာသုံးထားတဲ့ Memory ဆိုတာက သာမန် အမျိုးစားမဟုတ်ဘူး။
More Active RAM Used Illustrated by Sony
လွယ်ကူသွားအောင် ပြောရရင် ရှေ့စာလုံး G ဆိုတာ Graphis Double အရှည်ပြောရရင် Six Synchronous Graphics Random Access Memory လို့ ပြောတာပါ။ DDR4 (Double Data Rate) ထက် ၅ ဆ မက ပိုမြန်ပြီး Pin တစ်ချောင်းစီက 16Gbit/s Speed ရှိတယ် (ဒါကတော့ သီအိုရီကို ရွတ်ပြတာပါ)
GDDR5 က 8Gbit/s ရှိပြီး DDR4 က 3.2Gbit/s ရှိတဲ့အတွက် RAM Speed ထက် ပိုမြန်တယ်။ ဒါပေမယ့် Single-channel နဲ့ လာဖို့များတဲ့အတွက် Dual-channel Architecture ကို အပြည့်ဝ အသုံးမချနိုင်သေးဘူး။
Less active RAM used in GDDR5 Package
Dual သုံးဖို့လည်း မလိုဘူးထင်ပါတယ်၊ Microsoft ကြေညာချက်အရ 16GB Memory မှာ GPU အတွက် 10GB Optimal Memory အသုံးပြုမှာဖြစ်ပြီး 560GB/s နဲ့ Run မယ်ဆိုထားတဲ့အတွက် Graphics Power မနည်းဘူး။
ကျန်တဲ့ 6GB ကိုတော့ CPU ၊ I/O Operations တွေနဲ့ System ပိုင်းဆိုင်ရာ အသုံးပြုဖို့ ထားရှိမှာဖြစ်ပြီး 336GB/s Bandwidth ရှိမယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ ဒီလို PC Graphics Memory သုံးထားတဲ့အတွက် Xbox Series X ဘယ်လောက်ထိ စွာမလဲ စားမြုပ်ပြန်ကြည့်တာပေါ့။
Impressive GPU Performance on Xbox
ကျနော့်အမြင် 11GB GDDR6 Memory သုံးထားတဲ့ RTX 2080 Ti ရဲ့ 616GB/s Memory Bandwidth နဲ့ အရမ်းမကွာတော့တဲ့အတွက် မရှိဘူးဆိုရင်တောင် RTX 2080 Super ထက် ကျော်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Xbox Series X Performance က 12 TFLOPS နဲ့ ညီမျှပြီး nvidia ကတ်က 11.15 TFLOPS ပဲ ရှိလို့ပါ။
သူ့ထက်စွာတာက Radeon RX Vega 64 နဲ့ RTX 2080 Ti တို့ဖြစ်ပြီး 12.66 TFLOPS နဒ့ 13.45 TFLOPS အသီးသီးရှိတယ်၊ PlayStation5မှာတော့ အကန့်ခွဲတာမျိုး ဖွင့်ပြောထားတာ မရှိဘဲ 16GB GDDR6 Memory ကိုပဲ 448GB/s နဲ့ Bandwidth ရှိမယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။
သီအိုရီနဲ့ Benchmark တွေအရ RTX 2080 စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ Level တူရှိနိုင်တယ်လို့ ပြောနိုင်ပြီး ဒီလိုကွာသွားတာ Xbox Series X ရဲ့ 16GB GDDR6 Memory က 320mb Bus ရှိတယ်၊ PS5 က 256mb Bus ဖြစ်သွားတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ။
PS5 Graphics Performance Illustration by Sony
ဒါပေမယ့် PS Graphics စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ Variable Frequency ပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အတွက် ကစားတဲ့ဂိမ်းအလိုက် GPU Speed ကို လိုအပ်သလောက်သုံးမယ်။ နောက်တနည်း ပြောရရင် စွမ်းအင်ချွေတာဖို့အတွက် ထိရောက်တယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ အစဥ်လာမပျက် Xbox ကျော်တက်စမြဲဆိုတော့ 10.25 TFLOPS ရှိတဲ့ PS5 ကို ချေသွားပြန်ပါပြီ။ မျိုးဆက်သစ် Console ၂ မျိုးစလုံးမှာ Hardware-accelerated Ray Tracing နည်းပညာ ပါဝင်ဦးမယ်ဆိုတော့ Gaming Experience ကို နောက်တစ် Level တင်ပေးဦးမှာပါ။
GPU RTX 2080 Ti RX Vega 64 Xbox Seris X RTX 2080 Super RX Vega 56 PS5 RTX 2080
TFLOPS 13.45 12.66 12 11.15 10.54 10.25 10.07
PlayStation5နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျနော် ဖြည့်စွက်ပြောချင်တာက Developer တွေကို Compute Units (CU) သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချနိုင်ဖို့အတွက် မျှော်လင့်နေပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောက PS5 GPU မှာ 36CU ရှိပြီးတော့ Xbox Series X မှာ 52CU ရှိတဲ့အတွက် Performance ပိုကောင်းတယ်။
တကယ်လို့သာ PS5 ဂိမ်းတွေအတွက် CPU နဲ့ GPU မျှခြေကို အချိုးချ Optimize လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် Performance ကို Default တန်ဖိုးထက် ပိုထုတ်ပေးနိုင်မယ်၊ Console ကိုယ်တိုင်က Variable Frequency နည်းပညာသုံးပေးထားတဲ့အတွက် ပစ္စည်းအမှန်ကန် ထွက်လာမှသာ Xbox နဲ့ Level လိုက်မလား စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
ဒီတော့ GPU ပြိုင်ပွဲမှာ Xbox ပိုသာနေတယ်လို့ ပြောနိုင်ပေမယ့် နည်းပညာအပိုင်းမှာ PS5 ပိုမိုက်တယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့မရတဲ့ အချက်ပါ။ Console တွေထွက်လာရင်တော့ ပြောလို့ပိုကောင်းပြီ။
Storage Media မှာတော့ လုံးဝ ဆီနဲ့ရေလို ကွာသွားပြီ။ Console Class ဆိုပေမယ့် Sony ရဲ့ Custom SSD ကမြန်တယ်၊ မတရားကို မြန်တယ်ဆိုတာထက် လန့်ဖို့ကောင်းတယ်။ Xbox Series X နဲ့ ယှဥ်ရင် ၂ ဆ လောက်ကို ကွာနေတဲ့အတွက် System Architect “Mark Cerny” က No Loading Time လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
Super Fast SSD Performance Illustrated by Sony
သီအိုရီအရဆိုရင်လည်း PS SSD က RAW Speed မှာ 5.5GB/s ရှိပြီးတော့ I/O Compression မှာဆိုရင် 8 ~9GB/s အထိ ရှိပါတယ်။
Xbox Series X ကတော့ 2.4GB/s ၊ 4.8GB/s ပဲ ရှိတဲ့အတွက် NVMe အမျိုးစားချင်း အတူတူတောင် PS က ပိုမြန်တယ်( PCIe 4.0 မှာ သုံးလာမယ့် Consumer SSD ဆိုတော့ ကြွေရမယ်)
Custom Controller on Sony SSD
ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ ဂိမ်းရေးဆွဲတဲ့အခါ SSD Speed ကို Slow Down လုပ်ဖို့ လိုမယ်လို့ ပြောနေကြတဲ့အတွက် နည်းပညာပိုင်းမှာ Sony ပိုသာနေတယ်လို့ သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က Sony ရော Microsoft ကော Storage တိုးချဲ့အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ခွင့်ပြုထားပြီး PS မှာ Third Party NVMe SSD သုံးနိုင်မယ်၊ Xbox မှာတော့ သီးသန့် Card Format ကိုပဲ သုံးရမှာပါ။ (PCIe 4.0 ရမရ မသိရသေးပါဘူး)
ကယ် အသံပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ Xbox ဆီက တစ်စွန်းတစ မကြားရဘူး။ ပြိုင်ပွဲ စည်းမျဥ်းက စွမ်းဆောင်ရည်ဖက် သွားနေတာဆိုတော့ CPU ၊ GPU ကို အသားကုန် တွန်းတင်ကြတယ်။ အဲ့မှာ Mark Cerny ပြောသွားတဲ့အချက်က
ဂိမ်းကစားတဲ့အခါ Visual ပိုင်းက အရေးကြီးဆုံး ဆိုပေမယ့် Audio မပါရင် ဘာ Feel မှ မရှိဘူး ဆားမပါတဲ့ဟင်းလိုပဲ ပြောရမယ်ပေါ့။
ဒိအတွက် Sony ဖန်တီးထားတဲ့ 3D Audio က လိုအပ်ချက်တွေ ထောက်ပံ့နိုင်မှာဖြစ်ပြီး မြင်လွယ်အောင် ပြောရရင်တော့ Virtual Surround စနစ်ကိုပဲ ပိုပီပြင်လာအောင် ဒီဇိုင်းဆွဲပစ်လိုက်တာပါ။ သိတဲ့အတိုင်း Virtual Surround ကို Headphone အများစု ထောက်ပံ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ PlayStation5နဲ့ တွဲကစားမယ်ဆိုရင် ဘာထူးလာမလဲ?
Mark Cerny အဆိုရ
ရန်သူတွေရဲ့ နေရာကို အသံနားထောင်ရုံနဲ့ ဘယ်မှာ ရှိနေမလဲ အတိကျ ခန့်မှန်းနိုင်မယ်
DEMO ကို ၂၀၁၀ တုန်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Dead Space ဂိမ်းနဲ့ နမူနာ ပြောခဲ့ပြီး အဲ့ဒီဂိမ်းက Audio ပိုင်းမှာ ချီးမွမ်းခံထားရတဲ့ Sci-fi Horror
Publisher Electronic Arts ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး Developer Visceral Games က ဖန်တီးခဲ့တယ်၊ ကစားဖူးသူတွေဆိုရင် သုသာန်တစပြင်လို့ ခြောက်သွေ့နေတဲ့ USG Ishimura ယာဥ်ပျက်ကြီးထဲမှာ တယောက်ထဲသွားရင် ခွက်တစ်ခွက် ပြုတ်ကျတဲ့အသံကအစ ရင်ထိန့်သွားအောင် လုပ်တတ်တာ သိကြတယ်။
EA Dead Space Video Game Illustrated in Sony 3D Audio Presentation
ဆိုလိုချင်တာ ဂိမ်းပဲဆော့ဆော့ ၊ ရုပ်ရှင်ပဲကြည့်ကြည့် Visual လိုပဲ Audio ကလည်း ရသမြောက်အောင် ဖန်တီးနိုင်တာကို သိစေချင်တာပါ။ လိုရင်းပြန်ဆက်ရရင် Virtual Surround ဖန်တီးနိုင်တဲ့ Headphone ကို 360° ဒါမှမဟုတ် 3D Audio Space ကို ဖန်တီးပေးလိုက်မယ်။
ဒါကြောင့် 5.1 ၊ 7.1 အဆင့်က ကွဲထွက်လာပြီး Sound Channel တွေကို Directional ဆိုတာထက် Positional Audio ဖြစ်သွားအောင် Dolby Atmos နဲ့ ထုတ်ပေးမယ်။ ကွ့န်ရရင်တော့ ကစားသူဟာ တကယ့် Virtual Space ထဲ ရောက်သွားသလို In-game အသံမျိုးစုံကို လားရာအတိုင်း အတိကျ ကြားနေရမှာ ဆိုလိုတာပါ။
3D Audio Diagram
ဒီ Tech က Develop လုပ်နေဆဲ ဖြစ်တာဆိုတော့ PS5 ထွက်လာတဲ့အခါ အရင်ဦးဆုံး Headphone တွေနဲ့ 3D Audio ကို နားဆင်နိုင်မယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ Surround Sound Speakers ၊ TV Speaker တွေနဲ့ပါ တွဲဖက် အလုပ်လုပ်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ Sony ပြောထားပါတယ်။
အဲ့တော့ Console တစ်ခု ဖန်တီးရတာ မလွယ်သလို ခုချိန်မှာ Future Proof ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ မေးခွန်းက တစ်ဆင့်ထက်တစ်ဆင့် တက်နေတဲ့ နည်းပညာနောက် Hardware တွေ အမီလိုက်နေရတယ်။ PS5 နဲ့ Xbox Series X တို့ထွက်ပြီး နောက်တနေ့မှာပဲ DirectX 12 Ultimate ကို ကြေညာသွားတယ်။
Ray Tracing Tech 1.1 နဲ့ တခြား Improvement တွေ ပါလာတဲ့အတွက် Next Gen Console ၊ PC Graphic Cards တွေနဲ့ ပိုလိုက်ဖက်တော့တယ်။ အခု Sony နဲ့ Microsoft တို့ကို ကြည့်လိုက်၊ Xbox က GPU စွမ်းဆောင်ရည် တစ်ခုပဲ ပိုသာတယ်ဆိုပေမယ့် Radeon RX 5700 XT နဲ့ RX Vega 56 GPU ယှဥ်သုံးရသလိုပါ၊ နောက်တစ်ခု Fortnite ကို PC မှာထက် MacOS မှာ ကစားရင် ပိုကောင်းတယ်လို့ ပြောကြတဲ့ နောက်ကွယ်မှာ Software Optimization ပါကိုပါတယ်။
စာဖတ်သူတွေ ခုဖတ်ပြီးသွားတဲ့အတိုင်း PS5 နည်းပညာက ပိုပြီးတော့ Advanced ဖြစ်တယ်၊ Future Proof ဖြစ်တယ်ဆိုတာထက် ဂိမ်းဖန်တီးမယ့် Developer တွေကို စွမ်းအင်နဲ့ Performance ၂ မျိုး နှစ်သက်သလို ရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားတာက Impressive ဖြစ်စရာပါ။
နောက်တစ်ချက်က PlayStation4Game တွေအထိ Backward Compatibility ရမယ်လို့ ပြောသွားတဲ့အတွက် သတင်းကောင်းလို့ ပြောရမယ်။
Console ၂ မျိုးလုံး ၂၀၂၀ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ ထွက်လာတော့မယ် ဆိုပေမယ့် ရောင်းချမယ့် စျေးနှုန်း မကြေညာထားသေးပါဘူး။ ကျနော် ပြောနေတာလည်း များသွားပြီဆိုတော့ Xbox Series X နဲ့ PS5 ဘာဟာပိုကြိုက်လဲ ထင်မြင်တာလေးတွေ သုံးသပ်သွားပါဦး။
Source: Venture Beat ၊ The Verge ၊ Kotaku ၊ TomsHardware ၊ Arstechina ၊ PCgamer